Egwuregwu Nkụzi - Gaa! AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ (Ụdị oge // BSO // CAMPUS RUGGEVELD)
nwa ị nwere ike ịkwọ ụgbọala m
ụdịdị dị iche iche School > Ihe ọmụmụ anyị > Auto > Auto arụzi
Na ọzụzụ BSO oge zuru ezu ị mụtara ịrụ ọrụ n'adabereghị n'ụgbọala, ụgbọala, ụgbọala, wdg. Ọ bụ otu ọzụzụ dị irè na ihe ole na ole n'ozuzu. Ị na-amụta iji mee nchọpụta ziri ezi maka ntụpọ, na-edebe ụgbọala ma rụzigharị dịka iwu nke nkà. Nke a na mkpado.
Na 2 degree degree Ị na - amụta iji (na) ezukọta (hum) igwe kwụ otu ebe, dochie anya ụkwụ, wdg. Ị ga - amụta ihe eletriki eletrik na - echekwa ụgbọala ahụ. A na-atụle akụkụ dị iche iche nke ụgbọ ala ahụ na ọrụ ndị ị mụtara na-emetụta ya, tinyezie ya na ụgbọala ahụ. Ị na - amụta (de) izukọta ma dezie mpempe akwụkwọ na akụkụ ahụ: ịrụzi mgbawa, iwepụ ihe nsị, dochie akụkụ ...
Na 3 degree degree ị ga-enweta ihe ọmụma zuru oke banyere akụkụ dị iche iche na ọrụ nke ụgbọ ala ahụ. Nke a na-agụnye ma ngwaọrụ ma ọkụ eletrik. Ọzọkwa engines, akụkụ ọkpụkpụ, chassis, usoro mmanụ ụgbọala dị iche iche na ọrụ ahụ dị n'usoro ihe omume ahụ. Ị na-amụta iji obere nchịkọta ọnụ site na kọmputa maka ịkọ ọnụahịa ọnụahịa ma soro onye ahịa ahụ kwurịta ya.
Mgbe ị na-arụ ọrụ, ị na-amụta iburu n'uche nchekwa nchekwa maka ụgbọ ala na ụkpụrụ gbasara ahụike, ịdị ọcha, gburugburu ebe obibi na ergonomics.
N'oge gị ụwa ị nweta ohere zuru oke nke ihe ị maara ma nwee ike itinye n'ọrụ. Ị na-atọ ụtọ ezigbo ọrụ n'ime ụgbọala.
Ị na-achọ igodo maka ụgbọala, ụgbọ ịnyịnya na ịnyịnya ígwè? Ịmasị ụgbọala mara mma ọ na-amasị gị? Ị dị njikere ịmụta ihe site n'omume, ọ bụ na ị naghị ajụ ọrụ nkịtị?
Ị nwere ike ịmalite mgbe ọ bụla na usoro ihe omume Automechanics, ọ bụ ezie na ihe ọmụma dị mkpa nke ndị na-ahụ maka nkà na ụzụ bụ n'ezie. Anyị na-atụ anya na ị ga-anụ ọkụ n'obi ịmụta ma nwee mmasị sara mbara na ndị ọrụ ntanye na ụgbọala. Ị nwere ọgụgụ isi n'ozuzu ya mana anaghị elelị akụkụ nke ọrụ ahụ. E kwuwerị, ugbo ala nke oge a jupụtara na teknụzụ na teknụzụ ọhụrụ.
Mgbe nhazi 3e Auto arụzi ị nweta ya akwụkwọ nke Secondary Education. Ị nwere, Otú ọ dị ọ bụghị akwụkwọ diplọma nke abụọ. Ya mere, a na-atụ aro ka inwe otu Afọ 7e maka iche iche ịgbaso. N'ụlọ akwụkwọ anyị, ị nwere ike ịmepụta nke ọma na ebe a na-amụ ihe Egwuregwu Nchekwa onwe. Mgbe ọ na-enweta ya diplọma nke mmụta sekọndrị na Business Management na ị bụ nnukwu ụgbọ ala ụgbọ ala na ị nwere ike ịmalite ọrụ na ọrụ ma ọ bụ ọbụna amalite azụmahịa gị.
Afọ 3e nke na-erughị ala (37KB, .pdf)
Afọ 4e nke na-erughị ala (37KB, .pdf)